I-Forest Hill, i-Benderloch eduze ne-Oban - I-Airbnb
I-Forest Hill, i-Benderloch eduze ne-Oban
Benderloch, Argyll & Bute, i-United Kingdom
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Winnie
U-Winnie Ungumbungazi ovelele
Indlu evulekile nethokomele enamakamelo okulala angu-3 edolobhaneni elincane, izindlu zokugezela ezingu-2, ingadi, elungele iholide lomndeni lokuphumula! Ukuqwala izintaba okuthakazelisayo kwasendaweni, eduze nezindawo eziningi ezinhle nezindawo ezihehayo, uhambo lwemizuzu engu-15 oluya edolobheni eliphithizelayo lase-Oban, uhambo lwemizuzu engu-45 ngemoto oluya e-Fort William. Kukhona futhi umzila womjikelezo ngaphesheya komgwaqo ohamba cishe yonke indlela eya e-Ballahulish (amamayela angu-9 ukusuka e-Fort William) enamakhefu ambalwa, nezindawo ezimbalwa lapho kufanele unqamule khona umgwaqo ukuze uqhubeke nomzila ngakolunye uhlangothi.
I-Forest Hill yikhaya elithokomele, elinendawo yokuphumula enkulu, amagumbi okulala angu-3, amagumbi okugezela amabili, ikhishi lokuhlala egumbini elithokomele kakhulu/elangeni (hhayi ukusetshenziswa ngo-1 October-15 Mashi), ihhovisi elincane, nengadi enkulu evalekile. Kunombhede olala umuntu oyedwa ekamelweni elikhulu elingasetshenziswa izingane ezingafuni ukulala ekamelweni zizodwa. Kunendawo yokupaka eyenzelwe izivakashi kuphela eyanele ngaphambi kwendlu. Ikhishi linakho konke okudingayo, nakho konke okudingayo ukuze upheke. Kunikezwa amashidi namathawula ombhede ahlanzekile. Kukhona indlwana yokuhamba, isihlalo esiphakeme kanye nobhavu wengane uma kudingeka.
4.89 · 312 okushiwo abanye
I-Benderloch iyidolobhana elithulile elingamakhilomitha angaba ngu-7 ukusuka e-Oban futhi indawo enhle kakhulu yokuvakashela ugu olusentshonalanga ye-Scotland. Yindawo ekahle kakhulu yabantu abathanda impilo yomoya ovulekile, kuyilapho uba nedolobha eliphithizelayo lase-Oban ngemizuzu engu-15 yokuhamba ngemoto, enezindawo zokudlela eziningi namaphabhu okuphila kwasebusuku. Ibhishi lase-Tralee liqhele ngemizuzu eyishumi (i-pebble eduze nesiphephelo, isihlabathi esikude), unyawo luka-Ben Lora luseduze kakhulu - ingaphezulu lika-Ben Lora lithatha isikhathi eside (!), ukugibela okunzima impela, kodwa kunezindawo eziningana zokubukwa ezinhle kakhulu phezu kwe-Morven, i-Isles of Lismore ne-Mull kanye ne-Lynn yase-Lorne. Leli dolobhana lingamakhilomitha angu-36 ukusuka e-Fort William no-Ben Nevis, no-26 ukusuka e-Glencoe. Isitolo edolobhaneni sivula ekuseni kakhulu futhi sivala sekwephuzile futhi sithengisa konke kusuka emaqanda asendaweni asepulazini nobisi kuya kubhiya newayini. Kukhona futhi i-cafe enhle kakhulu nesitolo sezincwadi (ukuvulwa kwenkathi yonyaka) esinikeza ama-scones amahle kakhulu emhlabeni, kanye nesiteshi se-petrol esithengisa i-Petrol (ngokusobala!) kanye ne-caravan gear, amabhuzu wokwamukela kanye nezinye izinto eziwusizo (ezivuliwe ngoLwesibili, ngoLwesine nangoMgqibelo ekuseni.
Ngihlala egalaji eliguquliwe futhi ngitholakala ngokuphelele ukuze ngithole iseluleko nolwazi lapho uhlela uhambo lwakho nalapho uhlala khona. Ngiyakujabulela ukwamukela izivakashi zami futhi ngizokwenza noma yini edingekayo ukuze ngiqiniseke ukuthi uneholide elihle e-Benderloch!
Ngihlala egalaji eliguquliwe futhi ngitholakala ngokuphelele ukuze ngithole iseluleko nolwazi lapho uhlela uhambo lwakho nalapho uhlala khona. Ngiyakujabulela ukwamukela izivakashi…
UWinnie Ungumbungazi ovelele